हामी यसलाई जान जब घर बारेमा गठन गरेको छ पहिलो छाप, हदसम्म हलवे मा निर्भर गर्दछ। खैर, यो ठूलो र विशाल छ भने, तर के भने यो सानो र गाढा गलियारे को भूमिका कार्य?
यो समस्या हल राम्ररी फ्रेम यदि तपाईं लागि सान्दर्भिक हुन हुनेछैन। सबै को पहिलो, हटाउनु निर्मित मंत्रिमंडलों र Mezzanines। सुन्दर खुला भ्कुन्डाउने साधन कोठा थप स्थान र मात्रा दिनेछु। एउटा सानो गलियारे गर्न हलवे भारी दराज समावेश गर्दैन। एउटा सानो टिप्न जूता लागि अडान तपाईं सधैं आफ्नो कुञ्जीहरू राख्नु वा झोला राख्न सक्छ जो टेबल, को रूप मा।
अक्सर, हाम्रो compatriots मा निर्मित यस्तो भवन मा स्थापना गर्न रुचि दराज "प्रवेश" - वा एक सेट, भनिन्छ जो। समतल, हैंगर, जूता लागि रैक: धेरै वस्तुहरूको संयोजन - एउटा सानो हलवे लागि फर्नीचर। साना हल, राम्रो खुला रैक मा लुगा राख्न, र एउटा बन्द कैबिनेट। यो धेरै कम ठाउँ लिन्छ, त्यसैले कोठा थप विशाल देखिन्छ।
राम्रो प्रकाश यस्तो बरु जटिल परिसर लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो वर्दी र उज्ज्वल हुनुपर्छ। को brightest ज्योति दर्पण माथि हुन छ। त्यसैले तपाईंले आफ्नो दराज को स्पष्ट देखिने भागहरु हुनेछ। को दर्पण देखि प्रतिबिम्बित भएको एक प्रकाश, सम्पूर्ण ठाउँ जोड दिइएको छ। थप प्रकाश को आवश्यकता मा एक सानो गलियारे गर्न हलवे। अलग भित्री विवरण आफ्नै दीपक प्रदान गर्न सकिन्छ। सानो दीपक प्यानल फर्नीचर को शीर्ष मा सेट, स्टाइलिश हेर्न।
सानो अपार्टमेन्ट धेरै मालिक एउटा सानो गलियारे गर्न प्रवेश हुनुपर्छ बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। यो भन्दा कार्यात्मक हुन्छ भनेर कसरी फर्नीचर राख्न? तपाईं उज्ज्वल रंग बनेको एउटा सानो गलियारे गर्न प्रवेश, सधैं आकर्षक र मूल हेर्न छैन भनेर सजग हुनुपर्छ। यो सायद रेखाचित्र संग, फर्नीचर थप संतृप्त रंग ध्यान राम्रो छ।
यस्तो सानो ठाउँमा बस ऐना आवश्यक - तिनीहरूले नेत्रहीन स्पेस विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यहाँ तिनीहरूलाई लागि धेरै विकल्प छन्। तल्ला - को दर्पण साना, आधा वा बढी हुन सक्छ। उत्तरार्द्ध विकल्प जहाँ त्यहाँ छोराछोरी छन् (सुरक्षा कारण) को घर, मा प्रयोग गर्न मनमोहक छ। आधा ऐना स्थिति जूता मन्त्री वा लकर अन्तर्गत।
पक्कै, उत्कृष्ट निर्णय गलियारे एउटा सानो कुना गर्न प्रवेश हुनेछ। यस्तो किरा तपाईंले केही वस्तुहरू, आफ्नो घटक, को कुना मा व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि राम्रो हो। यस मामला मा, तपाईं ठाउँ बचत गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी बहुमुखी र compactness जोडती कि फर्नीचर बेशकीमती। थप सजावट, तेज कुनामा बिना कुनै थप 40 सेमी भन्दा - एउटा सानो हलवे खोक्रो हुनुपर्छ लागि Wardrobe।
लागि सानो र साँघुरो गलियारे इष्टतम छ, यस्तो योजना: चिल्लो सेतो छत, दूध, बेज, पहेंलो खैरो वा हल्का हरियो पर्खाल। vases, समतल र अन्य सजावट - यो कोठा सजावटी विवरण एकदम बिट हुनुपर्छ।
सोफा "evroknizhka" हाडजोर्नी गद्दा संग - सजावट जीवित कोठा, नर्सरी, बेडरूम
जीवित कोठा लागि फर्नीचर छनौट। क्लासिक फेसनमा सधैं छ
दबाइ "Movalis": समीक्षा र आवेदन
Moskvich 2141 वा सिम्बा 1308?
"टेक्सास" - टिलर नयाँ पुस्ता!
रूसी संघ को घर: इतिहास र वास्तुकला
Getschinson दांत: कारणहरू, आकार र ढाँचाको विवरण, फोटो
के भने कम्प्युटर तल slows? कसरी गति आफ्नो कम्प्युटर तल slows जब भिडियो? जब तपाईं सक्रिय किन कम्प्युटर तल slows
ऐन्टेना केबल कसरी चयन गर्न